Ngwunye 2,4-Dinitrophenol (DNP) ọgwụ ọjọọ na-aba uru na-arụ ọrụ n'ahụ
/blog/gallery/Ngwunye 2,4-Dinitrophenol (DNP) ọgwụ ọjọọ na-aba uru na-arụ ọrụ n'ahụ
Ihe na 03 / 12 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
Ndị na-asọmpi ndị na-asọmpi kachasị ike na-aga mgbe ọ bụla na-achọ ọgwụ ike iji mee ka ahụ ha dịkwuo njọ. Otu n'ime ọgwụ ndị kachasị ike na-akpọ DNP. Ndị na-ebuli ihe dị elu na-ezo aka na ọgwụ a dị ka onye na-esote anụ ọkụ dị egwu n'ụwa. Nke a bụ n'ihi na ọ na-enye nsonaazụ dị ike na-ere ọkụ. Ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị mkpa ịchọrọ ịmatakwu banyere ngwaahịa a gụnyere ịmata ihe ngwaahịa ahụ gụnyere, otu o si arụ ọrụ, uru, nsonaazụ ya, ọkara ndụ, mmetụta ndị dị na ya, usoro ya na ebe ịzụrụ ya, dịka akọwara ya n'isiokwu a .
Kedu ihe bụ 2,4-Dinitrophenol (DNP)?
2,4-Dinitrophenol (DNP) bụ otu n'ime ọgwụ ndị nwere nnukwu nlebara anya n'etiti obodo ndị na-ewu ahụ, ahụike na ọha na eze maka ịtụnanya ya arọ ọnwụ mmetụta. Ngwaahịa a bụ ngwakọta nke nwere ike ịgbanwe usoro respiration cellular ahụ. Ná mmalite, a na-eji ngwaahịa ahụ rụọ ọrụ dịgasị iche iche nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe gụnyere iji ya mee ihe dịka onye mmepụta foto, pesticide, tee na nchekwa osisi.
A chọpụtara na NNNUMX na-akpata mmetụta ọnwụ nke DNP na afọ 1933 site n'aka Maurice Tainter, onye nchọpụta sitere na Mahadum Stanford. Ọ bụ n'oge a ka ọtụtụ ndị ji ọgwụ ahụ eme ihe dị ka enyemaka na-anwụ anwụ. Ndị mmadu nwere ike idaba na pound 3.3 n'ime izu ole na ole ma ọ bụrụ na ha anaghị eso ihe mgbochi ọ bụla. Nke a mere ka ọgwụ ahụ ghọọ otu n'ime ọgwụgwọ maka oke ibu, bụ nke a na-eji agwọ ọtụtụ ndị ọrịa.
Ajụjụ 8 jụọ onwe gị tupu iwere Ceilistat ntụ ntụ
Otú ọ dị, a chọpụtakwara na e jikọtara ngwaahịa ahụ na mmetụta ọjọọ na ndị dọkịta dọrọ aka ná ntị ndị ọrụ nke mmetụta ndị a. Ihe ndị a ga - esi n'otu onye gaa na nke ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị ga-anabata usoro ọgwụgwọ dịka ndị ọzọ ga-emetụta ọbụna obere obere doses. N'ọnọdụ ndị dị oké njọ, a kọrọ na ọtụtụ ọnwụ dinitrophenol. N'ihi ya, amachibidoro ọgwụ ahụ na US's Food and Drug Administration (FDA) na 1938. Ọ bụ mgbe ahụ ka ọgwụ ahụ si bụrụ ọgwụ dị n'okpuru ọgwụ ruo 1980 mgbe ọ laghachiri n'ahịa dịka ọgwụ ọgwụ ọjọọ. N'oge a, a na-ere ya n'Ịntanet ma na-akpọ ya 'eze nke ọgwụ ọjọọ na-efu'. Otú ọ dị, ịbụ ndị e rere n'Ịntanet nwere ọtụtụ ohere nke iji ya eme ihe na enweghị ntụziaka kwesịrị ekwesị site na ndị ọkachamara.
2,4-Dinitrophenol (DNP) uzuzu nwere ihe omimi nke C6H4N2O5 na arọ dị arọ nke 184.107G / mol. Aha ndi ozo bu Dinitrophenol Dimitrios, Dinitrenal, Nitromet na Alpha. A na-ejikọta ọgwụ ahụ n'ụzọ abụọ, 2,4-Dinitrophenol na sodium dinitrophenolate. 2,4-Dinitrophenol (DNP) ntụ ntụ dị na agba odo.
Kedu ka 2,4-Dinitrophenol (DNP) si enyere aka na ọnwụ?
Mgbe ị na-eche banyere mmetụta nhụjuanya dị njọ nke DNP kpatara, otu n'ime ajụjụ ndị mmadụ nwere ike ịjụ bụ, olee otu DNP si akpata ọnwụ dị arọ? Nke a bụ nkọwa nke usoro ntinye nke DNP nke na - ebute ọnwụ ma ọ bụrụ na ị na - ewere 2,4 - dinitrophenol (DNP):
N'okpuru ikpe ziri ezi, mkpụrụ ndụ na-aṅụ glucose n'ihu oxygen. Nke a na-ebute n'ime mitochondria nke mkpụrụ ndụ ahụ n'ime usoro a na-akpọ krebs okirikiri. N'ihi usoro a, protons na-ekesa n'ime mpempe akwụkwọ nke mitochondria site na ime n'ime mitochondria na-emepụta gradient chemiosmotic. A na-ahapụzi nwayọọ nwayọọ mgbe a na-emegharị protons ahụ site na mranchondria.
Ndị protons ndị a nwere ike ịbanye ọzọ site na adenosine triphosphate (ATP) synthase enzyme. Ịgafe protons site na enzyme a na-eduga ná mmepụta nke ATP, nke bụ isi iyi nke ike maka mkpụrụ ndụ. Ya mere, usoro a ga - eme ka e nwee ume iji nweta ume n'ime sel.
Mgbe a na-agbakwunye Dinitrophenol, ọ na-egbochi ntụgharị azụ nke protons n'ime mranchondrial n'ime ihu igwe. Nke a na - eduga na ụba protons n'etiti membranes nke mitochondria. Nchekọ a karịa ịta ahụhụ na matriks nke mitochondria, nke na-eduga n'ịlụ ọgụ nke mmepụta nke enzyme ATP synthase. N'ihi ya, ejighị ike ahụ maka mmepụta nke ATP ma ọ bụ echekwa ya n'ime ahụ. A na-ewepụta ike a dị ka ihe nkwụsị na ụdị okpomọkụ.
Iji kpuchie ụkọ nke ATP kpatara DNP, a ga-amanye ahu ahụ ka ọ gbanyekwuo carbohydrates, protein na abụba. Nke a na - eme ka ọnụ ọgụgụ nke abụba, protein na carbs na-ere ọkụ n'ime ahụ. Nke a na-eme ka ọnwụ na abụba dị arọ.
Nke a na-ebutekwa mgbanwe nke ọnụ ọgụgụ nke metabolism ọnụ, na-amụba ya na ọnụ ọgụgụ dị elu. Site na ọnụ ọgụgụ dị elu nke metabolism, ahụ na-ere ọkụ na abụba ngwa ngwa.
DNP na-ebelata arụmọrụ nke usoro mgbochi metabolic. A na-eme nke a site n'ịbawanye mmepụta nke okpomọkụ na mkpụrụ ndụ ahụ, usoro a maara dị ka nkwalite. N'ihi ya, ahụ na-agbaji ọtụtụ abụba na carbohydrates karịa na mbụ. Nke a nwere ike ime ka ọnụ ọgụgụ metabolism rịa elu dị ka 50 pasent. Ndị mmadụ nọ n'okpuru usoro DNP ga - enwe ahụhụ dị ukwuu. Ndị mmadụ adịghị mkpa ịnweta njikwa ihe oriri ọ bụla mgbe ị na-eji DNP maka ụkọ ọnwụ.
2,4-Dinitrophenol(DNP) uru dị na bodybuilding
Ndị bodybuilders amarawokwa iji DNP dị ka mgbakwunye na ha bodybuilding ọzụzụ. Ihe bụ isi kpatara ọrụ ntanetị aka nke DNP na-enyere aka na oke abụba na ibu. DNP nwere ọtụtụ uru ndị na-eme ka ụkọ ihe dị njọ maka ndị ahụ na-akpụ akpụ. Ihe ndị a bụ ụfọdụ n'ime uru ndị a.
DNP na-eme ka ikewapụ nke phosphorylation oxidative si otú a na-amụba ọnụ ọgụgụ nke metabolism.
Nke a na - emetụta ọnụ ọgụgụ nke ATP e mere na sel ndị ahụ na - egosi na DNP, sel ndị ahụ na - emepụta ọnụ ọgụgụ dị ala nke ATP ma e jiri ya tụnyere mmepụta nkịtị. Iji na-achọ ihe dị ike nke dị mkpa maka mmụba metabolism, a na-etinye ahụ n'ahụ nrụgide iji mepụtakwuo ATP.
DNP na-eme ka ụbụrụ na-emepụtawanye okpomọkụ.
Maka ahụ iji nweta obere ATP, enwere mgbanwe nke electrochemical gradient. Nke a pụtara na ike nke enwere ike iji maka aha ATP dị ka okpomọkụ. Mgbe ahụ na-emepụta ụzarị ọkụ n'ime ụlọ, ọtụtụ calorie na-eri ya na-ebute ọnwụ.
Ọnwụ ọnwụ nke DNP na-akpalitekwa site na mmụba ụbụrụ nke ụbụrụ na mgbaze glucose (glycolysis).
Mgbe a na-ejikọta usoro nke mgbochi nke ikpochapụ na ịbawanye glycolysis, ọtụtụ carbohydrates na-ere. Usoro ndị a na - eme ka arụmọrụ dị elu n'iwepụta ume, nke na - eme ka ọ ghara ịdị arọ.
A p ur u iji DNP mee ihe n 'agw ugw' u maka nsogbu uf od u na-ejikar i na nká.
Ọ bụ ezie na nke a emebeghị nke mmadụ, nchọpụta egosila na DNP nwere ike ịbụ ihe dị mkpa maka nzube a. Dịka ọmụmaatụ, nchọpụta egosiwo na a pụrụ iji ọgwụ ahụ mee ihe maka ịgwọ ndị na-arịa ọrịa strok. Nke a bụ n'ihi na o nwere ike igbochi mmebi nke strok ahụ kpatara. Ọgwụ ahụ nwekwara ike igbochi nrụgide oxidative na ndị ọrịa na-arịa ọrịa Huntington. Nke a na-enye aka site na arụmọrụ ọrụ mejupụtara nke DNP kpatara.
A pụkwara iji ọgwụ nje DNP na-agwọ ọrịa maka ọgwụgwọ ọrịa ọrịa nke ọrịa Parkinson.
Dịka ọ na-arụ ọrụ maka ọrịa Huntington, DNP na-enyere aka n'ịkwalite ọrụ igwe ma belata ohere ọ bụla maka emebi. Otú ọ dị, ọrụ ndị a adịghị etinye maka ụmụ mmadụ maka mkpa ọ dị iji nwetakwuo nnyocha.
Ndị mmadụ na-anwụ anwụ nwere ike iji ntinye DNP dịka enyemaka maka mmemme ha.
Nke a bụ n'ihi na ọ dịghị achọ iwu ọ bụla banyere otu esi eri. Ị nwere ike iri ezigbo nri ma mezuo ihe mgbaru ọsọ gị na ọnwụ. Ọgwụ a nwekwara ike ime ihe onye na-ebelata agụụ.
A pụkwara itinye ọgwụ DNP n'ọrụ ọgwụ dịka ọgwụgwọ maka ọrịa imeju.
Ọnọdụ a nwere ike ibute ọrịa ndị ọzọ dị ize ndụ dịka ọrịa cancer. Otú ọ dị, nchọpụta egosiwo ụfọdụ ikike nke DNP iji merie ọrịa a na oke.
DNP nwere ike ịgwọ ndị ọrịa na-arịa ọrịa shuga.
Ọrịa insulin na-eme ka ọrịa shuga dịkwuo elu. N'iji insulin na-eguzogide, a gbanwere mmeghachi omume nkịtị nke mkpụrụ ndụ na shuga na-achịkwa hormone. Nke a na-akpata nhụsianya n'ọkwa shuga na sel. DNP nwere ike ime ka insulin dị na mkpụrụ ndụ. Nke a na-enye aka belata ohere nke ịmalite ịrịa ọrịa shuga.
DNP bụ ihe ngwọta dị mma maka ndị na-achọ ịdakwasị abụba n'ime oge dị mkpirikpi.
Nke a nwere ike ịbụ ihe ngwọta zuru oke maka onye dị, dịka ọmụmaatụ, na-achọ ka inwe nnukwu ọdịdị maka ngosi. Nke a bụ n'ihi na mgbe ahụ gị nọ n'okpuru DNP, a ga-amanye ya iji abụba echekwara iji mepụta ume iji kpuchie ike ike nke DNP kere. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụghị ọtụtụ n'ime nri ị ga - eji maka nchekwa nke abụba. Ya mere, gị onwe gị na-abawanye abụba mgbe ahụ gị chọrọ ume karịa ike nkịtị. Ọtụtụ ndị na-ahụ maka ozu na-akọ akụkọ ntụrụndụ na-aga nke ọma mgbe ha jiri ya Ngwunye ọkụ na DNP.
N'ihi nsogbu ọnwụ ọnwụ Dinitrophenol na ike ịba abụba, enwere ike iji ya na-emeso ndị nwere ọnọdụ metụtara oké ibu.
Ihe gbasara nke a bụ na ọ dịghị emerụ akụkụ ndị ọzọ ma ọ bụ ọrụ ha ma ọ bụrụ na eji ya nke ọma. Ọnụ ọgụgụ nke metabolic na-arịwanye elu nke na-eme ka calorie buru ibu na-ebute ọnwụ. Ihe ndị a na-eme otu ọgwụ ahụ.
2,4-Dinitrophenol tupu na mgbe
A pụrụ iche na DNP dị ka otu n'ime ogige ndị dị irè a na-eji na-efu ọnwụ ma na-arụ ọrụ n'ahụ. Otú ọ dị, nke a na-achọ ka ndị ọrụ mara nke ọma ma dị mma iji belata ohere nke nsogbu ndị DNP kpatara. A pụrụ ịhụ nsị DNP na DNP ka ọ bụrụ na ọ ga-eme ka ọ nwụọ n'ime oge dị mkpirikpi, ya na ọtụtụ ndị ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ n'ime ndị ọrụ ahụ ekwuola na ha furu efu na 6kgs n'ime ụbọchị iri na-enweghị nri ọ bụla ma ọ bụ mmega ahụ. Nke a esonyere na 20% ọnwụ na abụba.
Mgbe ị na-achọ DNP n'ihu na mgbe ọ pụtachara, ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ dịghị arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ maka mmadụ niile. Nye ụfọdụ ndị, ngwaahịa a ga-enye aka na-edozi usoro ọ bụla ma ọ nwere ike inwe mmeghachi omume ndị ọzọ na ndị ọzọ ọbụlagodi na usoro DNP kachasị.
N'iji usoro DNP kwesịrị ekwesị, ị nwere ike inwe nnukwu mmasị Ngwọrọgwu DNP tupu na mgbe nsonaazụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, ozubuilders na-agbada n'etiti 5 na 15pounds. Ihe dị na ya bụ na ọnwụ ọnwụ DNP adịghị esoro nzaghachi ọjọọ site na akụkụ ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na enwere ike ijigide mmiri, a kwụsịrị mmiri a mgbe ị kwụsịchara ọgwụ ahụ. N'ihi ya, a ga-ejide mmiri dị nro n'oge ọnwụ DNP site na njigide mmiri, na-eme ka o sie ike ịkọ ọnụ nha ọtùtù nkịtị mgbe ọ na-aga. Mgbe usoro DNP na-aga n'ihu, a kwụsịrị mmiri ahụ ejigidere ya ma onye nwere ike gụọ kpọmkwem ihe dị arọ furu efu n'oge ọnyá DNP. Mgbe ọ na-aga, ọ dị mkpa ịnọgide na-aṅụ mmiri n'ihi na iwe ọkụ na-eme ka ị na-enwe nkụda mmụọ mgbe niile. Ụfọdụ na-ahọrọ ịmalite njem n'oge ezumike na ọnwa oyi kemgbe ọsụsọ nwere ike ịbụ ntakịrị mkpasu iwe na nkasi obi.
DNP na-emekwa ka a chọkwuo glucose n'ime ahụ site na ịchọta nke ATP, nke na-eme ka ahụ dị na ya gbanwee nnyefe nke glucose. Nke a na-arụ ọrụ dị oke mkpa na mmetụta nbibi ọnwụ.
Ụfọdụ ndị na-etinye DNP na insulin iji melite Nsonaazụ ọnwụ DNP. Insulin na-amụbawanye mmelite nke glucose nke na-emepụta ebe anabolic maka ọnwụ
Ndị nwere oke ihe ịrịba ama nwere ike chọpụta mgbanwe dịgasị iche na ọnọdụ ha n'okpuru oge mmefu DNP. N'okpuru usoro ọgwụgwọ, usoro ọnụọgụgụ ahụ nwere ike ibili na okpukpu abụọ ma ọ bụ obere ihe ịrịba ama. Nke a na-eme ka ọkụ na-ere ọkụ ngwa ngwa otú a na-ebelata oke ibu.
Ewezuga ọnwụ na abụba, DNP jikọtara ya na uru ndị ọzọ gụnyere nbelata T3. Nke a bụ karịsịa ma ọ bụrụ na ị nọ n'okpuru etrogenic anabolic cycle. T3 bụ maka ọkpụkpụ muscle catabolic nke nwere ike ime mgbe usoro DNP gasịrị. N'oge ụfọdụ, DNP nwere ike belata ọkwa T3 dị ala ma ọ bụ n'okpuru ọkwa kachasị mma. N'ọnọdụ ndị dị otú a, ị nwere ike ịkwado obere doses nke T3 n'oge okirikiri gị
DNP na-enyekwa ahụ gị ihe nrịba nke anabolic nke na-eme ka anya gị dịkwuo ọnụ na nke anabolic. Ọgwụ ahụ na-eme ka usoro ahụ nwere ike ghara ịbawanye uru.
2,4-Dinitrophenol ọkara ndụ
Mgbe ị na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe dịka ndị steroid, ozi ọkara nke ndụ dị oké mkpa. Ọkara ndụ nke ọgwụ bụ oge e mere maka ahụ iji kpochapụ ọkara ọgwụ ahụ na usoro ahụ. Dị ka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na iwere 100mg nke ọgwụ na ọkara nke otu awa, ọ pụtara na usoro gị ga-enwe 50mg nke ọgwụ ahụ mgbe otu elekere. N'ihi ya, ọgwụ ahụ ga - ewepụ awa 2 kpamkpam site na usoro ahụ.
Ọrịa DNP dị ogologo nwere ogologo ọkara ndụ ruo oge 36. Ọkara ndụ DNP pụtara na ọ bụrụ na mmadụ na-ewere 100mg, ahụ ga-enwe 50mg 36 awa mgbe usoro ọgwụ na 25mg gasịrị mgbe ọzọ 36 awa. Ka e kpochapụ ọgwụ ahụ kpamkpam, ọ ga-ewe ruo 252 awa.
Ihe omuma banyere ihe omumu nke DNP na enyere gi aka n'enye gi oge. Nke a bụ n'ihi na ọ na-ewe ogologo oge na ahụ nwere ọgwụ. N'ihi ya, ọ nwere ike ịkwado ịnweta obere doses ogologo oge. Dị ka ọmụmaatụ, mmadụ nwere ike iji usoro DNN na-agba ọkụ na-eme ka 25 gbanwee ya na ọgwụ 40mg kwa ụbọchị.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na n'ihi ogologo ndụ, ogologo ọgwụ na ọbara na-aga n'ihu na-amụba mgbe ọ bụla ị na-ewere ọgwụ ọhụrụ. Akụkụ ndị a nwere ike ibili na ọkwa ndị a na-atụghị anya ya. Nke a bụ ihe mere ihe ọmụma banyere ndụ ndụ DNP bụ ihe dị mkpa ịmara tupu ị na-ewere usoro nke DNP. Ọ na-enyere gị aka iji usoro ọgwụgwọ mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị iji zere itinye uche na nchịkwa nke DNP n'ime ahụ.
N'ihe gbasara DNP usoro, onye kwesiri ịkpachara anya ma gbasoo usoro ọgwụgwọ a tụrụ aro. Nke a bụ n'ihi na ọ nwere ike ịnwụ ịnwe DNP na nhazi usoro a na-achịkwaghị achịkwa. Ụfọdụ n'ime ọnwụ DNP a kọrọ na ọ bụ n'ihi ịṅụ ọgwụ ọjọọ. Ọ bụ ezie na a matabeghị ụdị ọgwụ kpọmkwem na-eduba n'ọnwụ, e mere atụmatụ na usoro ọgwụgwọ nke karịrị 2500mg nwere ike ịnwụ. Dị ka e kwuru na mbụ, iwepụta obere ọgwụ na ogologo oge cycles nwere ike ịbụ otu n'ime ụzọ kasị dịrị nchebe iji dọọ DNP. Site na ndụ DNP nke dị ogologo oge, ọ pụtara na ọgwụ ahụ na-ewe ogologo oge iji kpochapụ ya. Ya mere ị ga-eche na i nwere ike ijikwa ihe karịrị atụ aro. N'ime usoro DNP, ọ dịkwa mkpa izere ịṅụ mmanya na-aba n'anya. DNP na-egosipụta nsonaazụ ya n'ụzọ dị iche iche dabere na onye ọ bụla. Ị ga-eche na ọ maara na ọ na-arụ ọrụ.
Dabere na ịnwe ọgwụ ọjọọ, ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ikpebi ịdọrọ obere doses na ogologo oge ogologo ma ọ bụ akwa doses na obere oge. Dị ka ọmụmaatụ, obere dose nwere ogologo oge nwere ike ịdị ka nke a:
1 200mg kwa ụbọchị
2 200mg kwa ụbọchị
3 200mg kwa ụbọchị
4 200mg kwa ụbọchị
5 200mg kwa ụbọchị
6 200mg kwa ụbọchị
7 200mg kwa ụbọchị
8 200mg kwa ụbọchị
9 200mg kwa ụbọchị
10 200mg kwa ụbọchị
11 200mg kwa ụbọchị
12 200mg kwa ụbọchị
13 200mg kwa ụbọchị
14 200mg kwa ụbọchị
15 200mg kwa ụbọchị
16 200mg kwa ụbọchị
17 200mg kwa ụbọchị
18 200mg kwa ụbọchị
19 200mg kwa ụbọchị
20 200mg kwa ụbọchị
21 200mg kwa ụbọchị
N'iji ụdị ọgwụgwọ a, ị kwesịrị ịṅụ ọgwụ ahụ n'akụkụ abụọ kwa ụbọchị. Nke ahụ bụ, 100mg n'ụtụtụ na 100mg na mgbede. Ị ga-ebu ụzọ na-agba ọsọ maka ụbọchị iri na anọ (14) iji chọpụta ma ọ bụrụ na ị nwere allergies ma ọ bụ nsonaazụ na-egbu egbu. Maka ndị ọkachamara na-arụ ọrụ, onye nwere ike ịga n'ihu maka izu atọ (ụbọchị 21).
Maka usoro dị mkpirikpi na nnukwu usoro onunu ogwu, okirikiri a nwere ike iyi nke a:
5 400mg kwa ụbọchị
6 400mg kwa ụbọchị
7 400mg kwa ụbọchị
8 400mg kwa ụbọchị
9 400mg kwa ụbọchị
10 400mg kwa ụbọchị
11 400mg kwa ụbọchị
A ga-amalite usoro ọgwụgwọ dị otú ahụ na obere dose nke 200mg kwa ụbọchị (nkewa dị ka 100mg n'ụtụtụ na 100mg na mgbede), na ụbọchị mbụ. Otú ọ dị, ndị ọkachamara ahụ nwere ike ikpebi ka ha ghara ịba ụba ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke ụbọchị n'ụbọchị.
Mmetụta mmetụta DNP
Ọ bụ ezie na ọgwụ DNP dị arọ na-anọgide na-arụ ọrụ kachasị mma maka ọnwụ, ọ na-ejikọta ya na mmetụta ụfọdụ. Ụfọdụ n'ime mmetụta mmetụta DNP dị oke njọ pụrụ ịdị oke egwu ma duga oke egwu dị egwu ndụ mmadụ. Otú ọ dị, e nwere ụzọ ndị dị nchebe iji nweta ọgwụ mgbochi ọnwụ DNP iji belata mmetụta ndị a. Ihe ndị a bụ ụfọdụ n'ime mmetụta ndị metụtara ya 2,4-dinitrophenol (DNP):
Ndị ọrụ nile nke DNP na-ahụ nnukwu mmepụta ọkụ n'ime ahụ ha. Igwe ahụ na-ebili n'elu nkịtị na-enye onye ọrụ ahụ ọnọdụ dị jụụ.
Ebe ọ bụ na DNP na-akpata nkwụsị nke ATP, a na-ahapụ ahụ na-enweghị ume. Nke a na-eme ka enwee mmetụta nke ikuku na-adịghị mma na ị na-adịghị ike ịrụ ọrụ ọ bụla dị mfe. Ọ bụ ezie na ókè nke a na-adabere n'ụdị chemical DNP ị na-ewere na ahụ gị, ụfọdụ ndị nwere ike ịnwe ụja dị oké njọ ruo n'ókè nke ịdina ụra. Nke a bụ n'ihi na ha agaghị enwe ike ọbụna rie. N'ebe a, onye ekwesịghị ịnọgide na dose ahụ. Enwere ike isoro nsogbu ndị ọzọ dị ka isi ọwụwa.
Ihe nlekota mmiri nke DNP na-aputa n'ihi nsogbu nke okpomoku na ahu. Okpokoro oku na-eduga na vasodilation nke n'aka nke na-ebute mmeba nke arịa ọbara. Mgbasawanye nke arịa ọbara na - eme ka ọbara na - eruwanye. Nke a na - emekwa ka mmiri jide. Mgbasawanye nke arịa ọbara ahụ na-ebelata ọbara mgbali. Ahụ na-echekwa ọtụtụ calcium dị ka ihe si na ya pụta, nke na-eme ka njide mmiri karị. Mmiri a na-eme ka ahụ ghara ịcha. N'okwu ndị dị oke njọ, ọ nwere ike ibute nsị nke potassium ebe ọ bụ na diuretics anaghị enyefe mmiri zuru ezu. Nke a nwere ike itinye onye ọrụ ahụ n'ihe ize ndụ ọnwụ.
akpịrị ịkpọ nkụ
Mmiri ịkpọ nkụ bụ otu n'ime mmetụta ndị DNP kachasị njọ. Ndị nọ n'okpuru DNP na-ahụkarị ụkọ mmiri n'anụ ahụ. Ya mere, a na - agwa ndị ọrụ ka ha buru mmiri buru ibu mgbe ha na dose ahụ. Nke a bụ n'ihi na mmiri dị ala nke dị oke ala nwere ike itinye ozu ahụ na-adịghị ike maka mmeri oke nke pụrụ iduga ọnwụ.
Onu ogugu di otutu nke ndi ntinye aka na DNP nwere uzo di ka otu n'ime ihe ndi di na DNP. Nke a nwere ike ịkpata ọtụtụ ihe tinyere nchịkwa electrolyte, obere pH n'ime ọbara, na ịchịa mmiri n'etiti ihe ndị ọzọ.
Mbelata nke electrolyte
Ebe ọ bụ na ejikọta DNP na oké sweating, ọtụtụ mmiri na salts na-efu site na ịsụ. Inwe otutu mmiri nwere ike ghara inye aka n'enyemaka ọ bụla n'ihi na ọ na-anọchi mmiri kama ọ bụghị salts. N'ihi ya, ndị ọrụ nwere ike iji v8 ihe ọṅụṅụ dịka ihe ngwọta maka nke a.
Ọria nwere ike ịbụ n'ihi sel furu efu na ahụ. Nchọpụta DNP nke na-adịghị emerụ ahụ na-eme ka ọkpụkpụ osmotic na-erute eriri afọ. Nke a bụ ihe ọzọ mere ndị ọrụ DNP nwere ike ịnweta ikpe nke afọ ọsịsa.
Ọ bụ ezie na ikpe nke allergies dị obere, ha ka na-egosipụta na ụfọdụ ndị. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịnweta ihu ọma phantom n'akụkụ ụfọdụ nke ahụ dị ka gburugburu ọkụ. Ihe nkedo nwere ike mechaa ghọọ nsị na ihu, egbugbere ọnụ n'etiti akụkụ ndị ọzọ. Ndị mmadụ na-enwe allergies nwere ike ịzụta ọgwụ ndị na-arịa ọrịa ant-allergies iji merie mmetụta ahụ. Ihe ka ọtụtụ n'ime ọgwụ ndị na-ahụ maka DNP bụ ndị na-arịa ọrịa ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ ga-eme ka usoro ahụ kwụsị.
N'okwu ndị siri ike, ụfọdụ ndị nọ n'okpuru ọgwụ DNP nwere ike ịhụ oghere odo mgbe ha na-ele anya n'elu ọcha. Otú ọ dị, mmetụta a n'akụkụ adịghị enwe mmetụta ọzọ ma ghara ịnọgide na mgbe ị kwụsịrị DNP.
Mmetụta ndị ọzọ DNP nwere ike ịgụnye ndị a:
Udo obi ojoo
Ike iku ume.
Ọkụ ọhụrụ na nkụ na ọnụ mgbe ị narachara ọgwụ ndị ahụ.
Ọ dị mma iji DNP
Ọ bụ ezie na DNP akara dị ka iwu na-akwadoghị maka oriri mmadụ, ọ na-anọgide na-abụ ọgwụ kachasị ike maka ụkọ ọnwụ. Enweghị ọgwụ ọ bụla nwere ike iji ya tụnyere ya mgbe ọ na-abịa na mmetụta dị njọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ejighị ya mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị, nke a nwere ike ịbụ ọgwụ kachasị njọ nke pụrụ iduga ọnwụ. Fọrọ nke nta ka ndị ọrụ DNP niile nwee ọganihu dị elu nke mmepụta ọkụ n'ime ahụ ha. Nke a na - eduga n'ịṅụ oké mkpọtụ. Dị ka e kwuru na mbụ, ọgwụ a enweghị mmetụta ọ bụla na-adịghị mma na akụkụ ụfọdụ dị mkpa dịka imeju, akụrụ.
Iji mee ka nchedo na nkasi obi gị dị mma mgbe ị na-eji DNP ma ọ bụ okirikiri, ebe a bụ ụfọdụ ndụmọdụ gbasara esi zere mmetụta ndị DNP ị ga - agbaso mgbe niile:
nri-Okwesighi ka DNP ma ọ bụrụ na afọ gị bụ ihe efu. Ụfọdụ n'ime nri ndị a na-atụ aro ka ị gụnye na nri gị mgbe DNP na-agụnye yoghurt breeze. Nke a dị ka antioxidant n'ihi blueberries ka yoghourt na-enyere aka na mgbaze. Ọzọkwa, buru ihe oriri na akwa eriri.
Jiri obere dosages- Na-amalite oge okirikiri site na obere dose, dịka ọmụmaatụ, 200mg kwa ụbọchị maka ụbọchị mbụ nke oge gị. Ọbụna mgbe ị na-echeghị ihe ọ bụla, ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ dị n'ime ahụ ebe ọ nwere ogologo DNP dị ogologo. Ụbọchị anọ mbụ gị na dose DNP dị ala ga-enyere gị aka ịnwale otú ị ga-esi nagide ọgwụ.
Gụnye ihe mgbakwunye ndị ọzọ mgbe ị na-eji DNP. Ihe mgbakwunye dịka ECA nwere ike inye aka ịnọgide na-enwe ike dị elu ma welie ababa abụba. Ọ pụkwara ịdị mkpa iji antioxidants dị ka Alpha Lipoic Acid (njikwa enyemaka nke abụba na shuga shuga), mkpụrụ osisi mkpụrụ vaịn, mkpụrụ osisi, tii tii, trimethylglycine na vitamin C na E.
Gbaa mbọ hụ na ị na-enweta mmiri zuru ezu n'oge usoro DNP.Nke a bụ n'ihi na DNP na-eme ka akpịrị ịkpọ nkụ na-ebutekarị n'ihi ịṅụbiga mmanya ókè.
A na-atụ aro ka ịṅụ ọgwụ n'oge oyi iji lụso oke mmiri ọkụ.
Ọ bụrụ na ị na-enwe mgbatị n'oge DNP, hụ na ị na-eme ka mgbatị ndị ahụ dị ala, karịchaa ma ọ bụrụ na ị na-ewere usoro nke 400mg na n'elu.
Na-eme nyocha mgbe niile iji mara mmekọrịta n'etiti DNP na ọgwụ ndị ọzọ. Nke a ga - enyere gị aka ijikwa usoro gị ma ọ bụrụ na ị na - aṅụ ọgwụ na ọgwụ ndị ọzọ.
Maka na ị nọ na nchekwa na DNP, ị ghaghị ịma otú ị ga-esi jiri ọgwụ ọjọọ mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ịkwesịrị ka ịghara ịgbagha ma ọ bụ karịa usoro ọgwụgwọ na 1gram. Ụdị ọgwụgwọ dị otú ahụ dị egwu. Ị ghaghị ịma nke ọma n'etiti uru ị na-enweta site na ọgwụ na ihe ize ndụ ndị ị na-ekpughe onwe gị.
Ebe ịzụta DNP
Mgbe ọ na-abịa ịzụta ọgwụ DNP, ọ dị mkpa ka ị hụ na e jiri ọgwụ ọjọọ akara ọgwụ na mba ụfọdụ. Otú ọ dị, ọ bụghị iwu na-akwadoghị ire ọgwụ maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ụlọ ọrụ ụfọdụ na-ere ya n'okpuru nọmba CAS DNP (51-28-5).
Ọ bụ ezie na DNP nwere ike ịbụ nanị na ebe ụfọdụ, ọ dị mfe ịnweta ọnụọgụ DNP maka ntụsara ahụ ebe ọ bụ na ha dị na ụlọ ahịa n'ịntanetị. E nwere ebe nrụọrụ weebụ na-ere ngwaahịa a na ndị ọrụ n'Ịntanet. Ezigbo ihe nlele nke weebụsaịtị ndị a nwere ike ịnweta ntụ ntụ nke DNP maka ire ere AASraw.
Enweta nke DNP ntụ ntụ n'elu weebụ dị nnọọ mfe n'ihi na ọ na-ewe obere oge ịchọta ebe nrụọrụ weebụ na-ere ọgwụ. N'ichebara ike na ihe ize ndụ ndị metụtara ọnwụ DNP, ọ dị mkpa ka ị kpachara anya mgbe ị zụtara ngwaahịa a na ntanetị. Nke a bụ n'ihi na ịzụta DNP ntụ ntụ na weebụ nwere ike jikọtara ya na aghụghọ ma ị nwere ike ịmalite ịzụta DNP adịgboroja.
Ndị ọrụ ga-enwetakwa ihe ndị na-ere ya na-ekwu mgbe ha na-eme DNP maka ire ere. Uru nke ịzụta DNP ntụ ntụ n'igwe bụ na ọ na-enye ndị ọrụ otu isi iyi ọgwụ ọjọọ. Ụfọdụ ndị na-ere ahịa n'Ịntanet ga-enye ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ nyocha. Nyocha ndị a nwere ike ịba uru maka nyocha gị, n'ihi na ha ga-enyere gị aka ịma otú ndị ọrụ ndị ọzọ si eche banyere ngwaahịa ahụ ma ọ bụ ndị na-ere ha. Na ụdị ozi a, ị ga-aghọta ahụmahụ nke ndị ọrụ ndị ọzọ nke DNP ntụ ntụ maka ire ere. Site n'inwe nghọta dị otú ahụ, ị ​​nwere ike ịme mkpebi ọhụụ mgbe ịchọrọ ịzụta DNP ntụ ntụ ntanetị.
DNP na-anọgide na-abụ ngwaahịa kachasị ike eji ndị mmadụ dị iche iche na-ebute ọnwụ, gụnyere bodybuilders. Ọ bụ ezie na ngwaahịa a metụtara ụfọdụ ihe ize ndụ na ihe ize ndụ ndụ, mgbe ejiri ya mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ọ na-enye nsonaazụ dị egwu. Ngwaahịa a nwere usoro nke ọma nke na-ebute ọnwụ ọnwụ. A na-ejikwa DNP mee ihe maka mgbatị ndị ọzọ dịka ịgwọ oke ibu na ọrịa shuga.
Mgbe ị na-achọ iji DNP fat burn tablets, ọ dị mkpa; gee ntị na nkọwa dị iche iche gbasara ọgwụ. Ndị a na-agụnye usoro ọgwụgwọ na oge kwesịrị ekwesị nke usoro DNP iji jiri ihe omumu DNP nke ọkara. Ihe ọzọ dị mkpa ị ga-atụle bụ mmetụta ndị metụtara ọgwụ a. Onye kwesiri ilebara ihe oriri ha anya n'oge onodi ogugu tinyere ihe ntinye DNP iji merie nsogbu ndi ahu. Na-enweta ndụmọdụ site n'aka ndị ọkachamara na na ngụkọta na ozi banyere DNP, ị nwere ike ịnọ na nchedo ọgwụ ọgwụ DNP.
1. Bagchi Debasis, Preuss Harry G .; Ibu oke: Epidemiology, Pathophysiology, and Prevention (2007). P.200, p.201, p.212, p.561
2. Henn Debra, Derogenio Deborah, Triggle DJ; Nri Nri (2005) p.42
3. Pam Grace nke Versaw; Mmetụta nke 2,4-dinitrophenol ahụ na-adịghị agwụ agwụ na Transcripts (Particle (1975) p.9, p.
4. Ledford (Jr.) Roy Merl; Mmetụta nke 2, 4-dinitrophenol Na Frog Heart Metabolism and Function (1949) p.23, p.25, p.26.
5. Breguet Amy E .; Nri Nri (2008) p.21, p. 90.
6. Blachford Stacey, Krapp Kristine M .; Ihe Mgbochi na Njikwa Ihe: Ozi Maka Ụmụaka (2003) p.130
7. Jameson J. Larry, De Groot Leslie J .; Endocrinology: E-Akwụkwọ Adults na Pediatric (2005) p. 1397
Ihe niile gbasara Trenbolone Enanthate ntụ ntụ Methasterone Steroid nke kachasị ike (Superdrol) Prohormone
Aasraw on MMAD (10 Demethyldolastatin)
Aasraw on N-Boc-dolaproine (120205-50-7)
Aasraw on Alprostadil, (PGE1), Prostaglandin E1
Aasraw on Adrenalin HCL
Aasraw on L-Epinephrine HCL (55-31-2)
Oral Turinabol (Oral Tbol) ntụ ntụ
Yohimbine HCL ntụ ntụ
Lorcaserin HCL ntụ ntụ
Ụkwụ ntụpọ (144060-53-7)
Nomegestrol Acetate ntụ ntụ
Otu esi eji Trenbololone Ntụziaka na-ejikọ Trenbolone Enanthate Powder 2019
2019 Otu esi eme ka testosterone enanthate homebrew na nzọụkwụ 6
Otu esi choputa ndi nwere uzo uzo di na 12 Steps
Boldenone Undecylenate: 8 Mgbasaozi Mmetụta Ị ga - achọ izere
Masteron Enanthate Na Longer Na - eme Androgenic Anabolic Steroid (AAS)
Masteron (Drostanolone propionate) Mmetụta, Ụdị, Mmetụta mmetụta
Copyright © 2019 aasraw Ikike niile echekwara. Ezubere ya www.cofttek.com www.buyaas.com www.apicmo.com www.phcoker.com